Notsapainay ny Tigra Ulefone, ary tianay izany | Androidsis
Notsapainay ny Tigra Ulefone, ary tianay izany
Jose Alfocea | | Finday, hevitra, Ulefone
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia notantaraiko anao izany Tigra Ulefone, un smartphone mahafinaritra kalitao avo lenta, fampiasa tsara, bateria malala-tanana kokoa, ary latsaky ny zato euro ny vidiny. Ny marina dia tiako izany, saingy tsy nanandrana izany. Eny eny.
Tena nanana fotoana nisedra ilay Tigra Ulefone vaovao aho tamin'ny voalohany, ary ny fahatsapako dia tsara kokoa noho ny nantenako. Holazaiko aminao ny zava-drehetra, manomboka amin'ny fonosana ny vokatra ka hatramin'ny fanombohany ary mazava ho azy, hizaha ny vidiny, ny fahafahany ary ny tombony azony isika.
1 Unboxing ny Tigra Ulefone
2 Tigle Ulefone: fahatsapana voalohany
3 Sarona mahatalanjona
4 Vidiny sy misy
5 Ny hevitry ny tonian-dahatsoratra:
Unboxing ny Tigra Ulefone
Ny maodely azoko dia ny Ulefone Tiger amin'ny habakabaka mainty misy tahiry 16 GB anatiny sy Fahatsiarovana RAM 2 GB. Araka ny hitanao amin'ireto sary manaraka ireto, ity smartphone ity dia tonga aminay anaty boaty mainty manintona tanteraka ety ivelany sy ao anatiny ary ahafahantsika mamaky ny marika sy ny maodelin'ny telefaona, ary ny sticker izay mampahafantatra antsika ny fanamarinana. Isa eropeana sy IMEI.
Ao anaty boaty dia azo antoka ny Tigra Ulefone. Ho fanampin'ny zava-misy fa ny baoritra dia tena mafy sy mahatohitra, ny fitaovana dia ampidirina ao anaty bosoa na toy izany koa izay hametahana ny hetsika kely indrindra. Ary koa, tonga tamiko tamina tranga mainty toy ny hoditra mainty izy io.
Raha esorintsika io ampahany io, dia hitantsika eo ambaniny ilay tariby USB mankany Micro USB, charger rindrina misy endrika eropeana (samy fotsy) ary brochure kely izay nanomezana famantarana teo aloha.
Tigle Ulefone: fahatsapana voalohany
Raha vantany vao nodinihintsika ireo fonosana sy izay rehetra miditra ao dia hitantsika ny Ulefone Tiger, finday avo lenta izay fahatsapana voalohany rehefa maka azy dia amin'ny fahamendrehana sy kalitao.
Miaraka amin'ny lanjan'ny 155 grama ao anatin'izany ny bateria, mitovy amin'ny finday avo lenta hafa amin'ireo toetra ireo, rehefa mandray ny Tigra Ulefone isika dia mahatsapa fa manana endrika tsara eo am-pelatanantsika, miaraka amina mikasika malefaka tsy mampino, Sisiny boribory ary tena marim-pototra amin'ny fanamboarana azy.
Ny antsipiriany iray dia rehefa manaisotra ny fiarovana plastika voalohany amin'ny efijery isika dia ho hitantsika izany efa tonga ny terminal miaraka amina mpiaro lamba iray, amin'izay isika afaka manomboka mankafy azy eo noho eo tsy misy tahotra.
Eo amin'ny ilany ankavanana isika dia manana ny bokotra on / off ary volume (samy amin'ny fomba somary manify sy voahaingo), raha eo an-tampony kosa dia ho hitantsika ny mpampitohy USB micro sy ilay mpampitohy jack 3,5 mm. ho an'ny headphones (tsy tafiditra) ary eo ambany, ny mikrô.
Ny efijery dia manana refy an'ny 5,5 santimetatra miaraka amin'ny fanapahan-kevitra HD 1280 x 720 teboka y Corning Gorilla Glass. Ny kalitaon'ny sary dia tanteraka, loko toa maranitra sy mamiratra.
Eo an-tampony no ahitantsika ny sofina ary a Fakan-tsary eo aloha 5.0MP (ampifandraisina amin'ny 8MP); ary eo amin'ny farany ambany, ny bokotra telo azo kitihina.
Ao ambadika, ankoatry ny fitadiavana dity (izay azontsika esorina) miaraka amin'ireo torolàlana hanalana ny fonony dia ho hitantsika ny fakantsary lehibe, a Fakan-tsary 219MP Sony IMX8 (interpolated amin'ny 13 MP) izay mirakitra horonantsary amin'ny 1080p sy eo ambaniny, a tselatra roa ary ny mpamaky fanondro. Ary eo amin'ny farany ambany, ny mpandahateny
Raha ny fahombiazana sy ny fluidity no resahina, dia miseho ho a ny Tigra Ulefone finday avo lenta avo lenta; ny efijery dia mamaly haingana ary ny fifandimbiasan'ny fampiharana dia mailaka sy ranoka, ary tsy ho an'ny kely kokoa satria manana a MT6737 Quad-Core 1,3GHz CPU miaraka amina RAM 2GB. Tsy telefaona matanjaka indrindra eto an-tany izy io, fa tsy mandiso fanantenana mihitsy.
Tonga miaraka Android 6.0 Marshmallow napetraka ho mahazatra, 16 GB fitehirizana anatiny azo aorina miaraka a karatra micro SD hatramin'ny 128GB y Dual SIM, mba hahafahantsika mitondra nomeraon-telefaona roa mba tsy hifangaro amin'ilay asa ilay asa.
Ary araka ny hitanao amin'ny sary teo aloha, ny rafitra fandidiana dia misy amin'ny Espaniôla, noho izany dia tsy hanana olana ianao rehefa manamboatra azy araka ny itiavanao azy.
Famaritana teknika hafa momba ilay Tigra Ulefone vaovao izay tsy tokony hohadinointsika dia:
Bateria SONY 4200 mAh izay manome elanelam-potoana hatramin'ny roa andro ary eo anelanelan'ny 480 sy 550 ora amin'ny fiaretana.
Chipset audio AWK9 (AW8739) azo antoka izay manome feo madio kokoa sy nohatsaraina.
Gravity, Hall-effects, Touch, Ambient Light Sensor
Fomba mpamonjy angovo
Fihetsiketsehana ivelan'ny efijery
Araka ny efa nampoiziko tany am-piandohana, tonga ny Tigra Ulefone miaraka amina takelaka boky vita amin'ny hoditra misy sisiny semitransparent izay mamela ny bokotra sy ny mpampifandray rehetra azo ekena rehefa manome fanohanana sy fiarovana. Zara raha "manatavy" ny terminal, noho izany dia mety tokoa.
Ny zava-dehibe amin'ity tranga ity dia ny varavarankely mitsangana lehibe manome antsika fampahalalana fototra ary, miaraka amin'ny fihetsika tsotra, manome antsika fidirana amin'ny fanaraha-maso sasany.
Ilay tigra Ulefone vaovao dia misy amin'ny lanitra mainty, volondavenona na volamena champagne, misy 16GB ny tahiry anatiny amin'ny vidin'ny latsaky ny 100 € Amin'ny alàlan'ny mpivarotra iraisampirenena toa ny Aliexpress, Gearbest, ary maro hafa.
Ny hevitry ny tonian-dahatsoratra:
Famerenana ny: Jose Alfocea
Fampisehoana sy hery
Tsy miaraka amin'ny Android 7.0 Nougat izany
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Notsapainay ny Tigra Ulefone, ary tianay izany
Afaka misintona sary miisa 32 MIUI 8 amin'ny Android ianao izao